नेता :आफू मिल्न नसक्ने, दोष नेपालीको टाउकोमा
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको समान हैसियतका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक टेलभिजिन अन्तर्वार्तामा ‘एक वर्षअघि पार्टी एकीकरणका क्रममा भएको ‘आलोपालो सरकार चलाउने’ सहमततिमा दायाँबायाँ गरे कोही नटिक्ने धारणा व्यक्त गरे । उक्त धारणा सार्वजनिक भएपछि नेकपामा भौतिक एकता भए पनि कार्यगत, कार्यशैली र भावनात्मक एकतामा भने ठूलो खाडल भएको सन्देश बाहिरियो ।
यो सन्दशले सबैभन्दा बढी टाउको दुःखाई अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बनेको उनको दिल्लीबाटै आएको प्रतिवादले प्रस्ट हुन्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा भाग लिन दिल्लीमा छन् । तर प्रचण्डको टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको धारणाको भने उनले दिल्लीबाटै प्रतिवाद गरेका छन् ।
दुईतिहाइएको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको पार्टी नेकपा भित्रभित्रै कमजोर र मनमुटावमा चलिरहेको हो कि ? भन्ने सन्देश प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्न खोजेपछि अ‍ेलीले दिल्लीबाटै दाहालले सार्वजनिक गरेको ‘आलोपालो सरकार चलाउने’ सहमति पुरानो कुरा भएको बताएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले झन आम नेपालीमा पुरानो कुरा कोट्याएर प्रचण्डले के सम्झन खोजेको ? भन्न खोजेका हुन् कि भन्ने अनुमान गर्ने वातावरण सिर्जना गराइदिएका छन् ।
ओलीले शुक्रबार यो कुरा नयाँ नभएको र पहिले नै सार्वजनिक भएको विषय भएको मात्रै भनेनन्, समान हैसियतका दुई अध्यक्षबीचको दोहोरीको दोष भने नेपालीको टाउकोमा थोपर्न समेत भ्याए । उनले भने ‘अनावश्यक कुरा उचाल्ने नेपालीको चरित्र नै यस्तो हो ।’
अध्यक्ष दाहालले भने सहभतिबाट दायाँबायाँ हुन खोजे कोही नटिक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी भए पनि उनले एक वर्ष होइन ४, ५ दिन मात्रै छ भनेर व्यंग्य गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष जेठ २ गतेको मितिमा हस्ताक्षरित तत्कालीन एमाले अध्यक्षओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भएको सहमति पत्रको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ ।